नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा मैले जित्ने आधारहरु धेरै छन् – KHABAR TIME
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा मैले जित्ने आधारहरु धेरै छन्
February 9, 2020 Khabar TimeLeaveaComment on नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा मैले जित्ने आधारहरु धेरै छन्
मोरङ पथरीशनिश्चरे–१ सगरमाथा चौकका स्थायी बासिन्दा हुन् अशोक शंकर । स्वालम्बी, निडर, कर्मठ, सहयोगी र स्पष्टवक्ता हुन् अशोक । युवा व्यवसायी शंकरले सन् २०१० (२०६७) मा पथरी जेसीजको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए । यस्तै उनी सन् २०१४ मा नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा बसेर कार्य सम्पादन गरिसकेका छन् । यसरी नै सन् २०१८ नेपाल जेसीजको कार्यकारीणी पद पनि सम्हालिसकेका छन् । आउँदो पुस ९ गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनको रत्ननगर जेसीजले होस्ट गर्दैछ । त्यहीँबाट नेपाल राष्ट्रिय जेसीजको ४६ औं महाधिवेशनको महासभाबाट अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेद्वारका रुपमा उभिसक्नु भएको छ । त्यही जल्दाबल्दा र जुझारु युवासँग समसामयिक विषयमा रहेर इमेची डटकमको लागि तयार पारिएको संवादका मुख्य अंशहरू : –
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवारी पदमा उठ्दै हुनुहुन्छ, तपाईको उम्मेद्वारी दिने आधारहरु के–के छन् ?
– हेर्नुहोस्, नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीका लागि त सर्वप्रथम जेसीज अभियान निरन्तर १० वर्षदेखि अथक खटिरहेको कर्मशील योद्धा सिपाही हुँ म । जेसीजको ढाँचा अनुसार व्यक्तिगत रुपमा ढाँचा तयार पार्ने हो । युवाहरुलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको बिषयमा परिवर्तन गर्ने । नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, सकारात्मक सोचलाई अभिवृद्धि गराउने, समुदाय भित्र उत्कृष्ट युवा बन्ने अभियानलाई समुदाय मार्फत् जोडेर सव्ल र सक्षम युवा निर्माण गर्ने भन्ने आधारहरु हुन् । यिनै माथि उल्लेखित कुराहरुलाई परिचालन गर्दै मुख्य मेरो उम्मेद्वावारी आधारहरु तय गरिएको हो ।
तपाईको नेपाल जेसीजको अध्यक्ष जित्ने आधारहरु के–के हुन त ?
– नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा मुख्य जित्ने आधारहरु पनि मैले प्रशस्त देखिरहेको छु । त्यसमा पनि जेसीजको ४ वटा क्षेत्रहरु मध्ये मेरो एरिया ‘ए’ यस क्षेत्रबाट सिंगल उम्मेद्वारीका रुपमा उभिएको छु । एरिया ‘डी’ मा कार्यकारिणी उपाध्यक्ष जस्तो पदमा बसेर निरुपृत भएर कार्य सम्पादन गरेको प्रशस्त अनुभव छ मसँग । युवाहरुलाई व्यक्तिगत र चौतर्फी विकासमा लैजाने, समाजको उत्कृष्ट युवाको रुपमा अन्तराष्ट्रिय युवाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान र अब्बल युवा निर्माण गर्ने एजेण्डा मुख्य भएकाले पनि मेरो जित्ने आधार प्रशस्त देखेको छु । त्यसमा पनि युवाहरुको साथ सहयोग, माया ममता सद्भाव प्राप्त भइरहेको छ ।
यदि तपाईले जीत हासिल गर्नुभयो भने, आम नेपाल जेसीजका लागि के योगदान गर्नुहुन्छ ?
– यदि मेरो जित भयो भने ‘युवाहरुलाई स्वास्थ्य र स्वच्छ अभियान’ चलाउनेछु । नेपालको आर्थिक विकासको आधार भनेको नै पर्यटन र कृषि हो । यस क्षेत्रमा लाग्नका लागि उद्यमशीलता, प्राविधिक विषयमा अब्बल बनाउने, तालिम दिने, पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई सफल वर्ष बनाउन नेपाल जेसीजले सन् २०२० मा छरिएर रहेका १ सय २० वटा देशमा नेपालको पर्यटकीय संभावनाहरुलाई आह्वान गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि मेरो योगदान रहनेछ ।
तपाई अहिले नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारी लागि कति एरियामा खटिरहनुभएको छ ?
– अहिले म नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारीका लागि देशभरि नै घुमिरहेको छु । देशभरिका १ सय ५१ वटा शाखामा गएर छलफल चलाएका छौं । शाखाको आवश्यकताको विषयमा सुझाव संकलन र भावी रणनीति तयार गर्नमा ठाउँ–ठाउँमा पुगेर घनीभूत अन्तरक्रिया कार्यक्रम कार्य गरिरहेका छौं ।
आफ्नो एरियाबाट तपाईले कतिको सहयोग पाइरहनुभएको छ त ?
– मैले आफ्नो एरियाबाट उत्साहजनक सहयोग, माया, सद्भाव व्यवहार पाइरहेको छु । त्यसमा सबै साथीभाइ, छलफल, सल्लाह, सुझाव, हौसला प्रदान भइरहेको छ । सबै दल, विभिन्न संघ÷संस्था बुद्धिजिवी, शिक्षक, प्राध्यापक, दिग्गज वर्ग, तह–तरकाबाट सहयोग पाइरहेको छु । आफ्नो एरियाबाट मलाई जिताउनका लागि अभियानै चलाएर उर्जा दिने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी प्राविधिक विषयमा पनि आर्थिक विषयमा पनि साथीहरुले अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । साथीहरुले मलाई जिताउन लागिरहनुभएको छ ।
आर्थिक पाटोलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ ?
– हाम्रो जेसीआई पथरीले एउटा बजेट अनुरुप सहयोगी हातहरु मार्फत् बजेटिङ गरेर, नजिकका छिमेकी शाखाहरुबाट पनि आर्थिक स्वतः स्फूर्त साथ आर्थिक पाटोलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । मुख्यतः सहयोगी हातहरुको पनि सहयोग आइरहेको अवस्था छ, त्यसबाट नै व्यवस्था मिलाएका छौं ।
अब तपाईको नयाँ योजना के छ ?
– अबको योजना भनेको सन् २०२० का लागि योजना रणनीति निर्माण गर्न, उम्मेद्वारी तालिममा सहभागिता जनाउने । साथीहरुसँग सम्पर्क, भेटघाट बढाइ छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको छ ।
नेपाल जेसीजले राजनैतिक पाटोलाई कसरी हेर्छ त ?
– जेसीजले कुनै राजनैतिक दल, पार्टीमा बसेर लबिङ गर्दैन । यो आफैंमा स्वतन्त्र संस्था हो । जेसीजबाट रिटाएर भइसकेपछि, देश बनाउने अभियानमा आफूलाई मनपर्ने राजनैतिक दल÷पार्टी रोजेर सवल, सक्षम देश निर्माण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिनु हो ।
नेपाल जेसीजको विभिन्न संघ÷संस्थासँग कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दछ ?
– जेसीआईको रणनीति समाजमा भएका सबै संघ÷संस्थाहरुसँग मिलेर समाजमा देखिएका, कुनै समस्यालाई गहनतम ढंगले हल गर्न र निरुपण गर्न लाग्नुपर्दछ । कोर्डिनेशन (संयोजक) भूमिका जेसीजले विभिन्न संघ÷संस्थामा खेलेको पाइन्छ । त्यसमा पनि जेसीजले दैवीप्रकोप, आगलागि, भूकम्प जस्ता कुराहरुमा आवश्यक पर्ने कुराहरुलाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न संघ÷संस्थाहरुसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
र अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?
– यो देशको विकास उन्नतिको लागि, समाजका लागि यस्तो विभिन्न लक्ष्य बोकेर हिँडेको संस्थाहरु राजनीतिक दल, क्षेत्र, लिङ्ग र जातजातिका आधारमा लबिङ हुनुहँुदैन । त्यसमा पनि यस्तो कुरामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । प्रत्येक संस्थाको आ–आफ्नै सुन्दर लक्ष्य हुन्छन् । त्यस लक्ष्यमा युवाहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा पुग्न दिने अन्ततगोत्वा यो समाज राष्ट्र निर्माण लागि योगदान हुनेछ । आम समुदायलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि व्यक्तित्व हेरौं । व्यक्तित्व विकासलाई चुनौं । नेतृत्व गर्न चाहने नेतालाई आफूलाई रोल मोडलमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हेरौं । त्यसमा पनि मेरो विगतको कार्य सम्पादन, निरन्तर लगावलाई चिनौं । त्यसैले प्रत्येक जेसीआई यही कुरालाई चिन्तन मनन गरौं । त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो उम्मेद्वारीलाई यहाँहरुले एक पटक जिताइ यो देश समाजको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् । मेरो सान्दर्भिक विचारहरु राख्न दिनुभएकोमा इमेची डटकमलाई मुरी–मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई मिल्यो ११ लाख सहयोग
निर्माता छविराज ओझा साधारण तारेखमा छुटे
एमसिसीबारे परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिए यस्तो बयान, अतिरञ्जित र प्रायोजित बनाउन खोजेको आरोप
February 4, 2020 Khabar Time
२ दिनसम्म नघटेको सुनको मुल्य आज यति धेरै घट्यो
युनिसेफले भन्यो : सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर
मागेको पोशाकले सिकेको कराते , जसले स्वर्णपदक चुम्यो February 13, 2020
‘दादुरा रुबेला खोप अभियान–२०७६’ सञ्चालन हुँदै February 12, 2020
नवनियुक्त महानिरीक्षक ज्ञवालीले दिए यस्तो बयान February 12, 2020
निर्माता छविराज ओझा साधारण तारेखमा छुटे February 9, 2020
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय अध्यक्ष पदमा मैले जित्ने आधारहरु धेरै छन् February 9, 2020
क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनलाई मिल्यो ११ लाख सहयोग February 9, 2020
मुख्यमन्त्री गुरुङ भन्छन् ः आध्यात्मिक शिक्षाले तनाव र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ February 9, 2020
सहकारी संस्थाद्वारा बस सेवा सञ्चालन February 4, 2020
२ दिनसम्म नघटेको सुनको मुल्य आज यति धेरै घट्यो February 4, 2020
विश्वबाट नै लोप हुने अवस्थामा रहेको गिद्ध नेपालमा फेला पर्यो February 4, 2020